कमाएको पैसा सकिएपछि कामको खोजीमा छिर्दैछन् भारततिर नेपालीहरु, सरकार मूकदर्शक ! | suryakhabar.com
Home प्रदेश सुदूरपश्चिम कमाएको पैसा सकिएपछि कामको खोजीमा छिर्दैछन् भारततिर नेपालीहरु, सरकार मूकदर्शक !
on: २ आश्विन २०७७, शुक्रबार १६:१४ In: सुदूरपश्चिमTags: No Comments
२ असोज, महेन्द्रनगर । साउदी अरबबाट हरेक महिना घर खर्च पठाउने छोरो कोरोना कहरमा घर फर्किएपछि कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा–१ का सिताराम डगौंरा यतिबेला चिन्तामा छन् ।
धन कमाएर घर धान्न भन्दै करिब २२ महिनाअघि रु डेढ लाख ऋण काडेर २५ वर्षीय छोरा राजेन्द्र डगौंरालाई साउदी अरब पठाएका सीतरामको सपना कोरोना कहरसँगै तुहिएको छ । “छोराले विदेशमा कमाएर एउटा ओतबस्ने घरसम्म त बनाउँला भन्ने सोचेको थिएँ” सीतारामले दुखेसो पोख्दै भने– “छोरो केही दिनअघि रित्तो हात घर फर्कियो, अब दैनिक जिवीकाको त कुरै भएन ऋण कसरी तिर्ने भन्ने भएको छ ।” सीताराम पनि पाँच वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया काम गरेर केही वर्षअघि फर्किएका थिए ।
“छोरा कमाउला र म घरको रेखदेख गरौँला भन्ने सोचेर बसिरहेको थिएँ” उनले भने– “बरु अब यहीँ केही काम पाइन्छ कि भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ, तर हामीलाई रोजगारी पनि कसले देला र ?” उनले दैनिकी चलाउन गाउँमा मजदुरी पाउन समेत गाह्रो भइरहेको बताए । “आफूसँग भएको जग्गामा केही आयमूलक व्यवसाय गरौँ छाडा गोरुले सखाप पार्छन्” उनले भने–“मजदुरी गर्न भारत जाऔँ त्यहाँ कोरोना बढेको समाचार दिनदिनै सुन्दा जानै मन लाग्दैन, मनभरि डर मात्र छ ।” उनको पाँच जनाको परिवार छ । उनीहरुलाई खर्च जुटाउन पनि जारी बन्दाबन्दीका कारण निकै नै समस्या भइरहेको उनले बताए ।
“म भारतको गुजरातमा होटलमा मजदुरी गर्न थालेको ८ वर्ष भयो” कोरोनाको डरले दुई महिनाअघि घर फर्किएका बडायकले भने–“ अहिले यहाँ घरमा साबुन किन्ने खर्च समेत छैन, सरकार साबुन पानीले हात धुनु भन्छ त्यही साबुन कसरी जुटाउने भन्नेसम्मको समस्या आएको छ ।”
होटल बन्द भएपछि केही समय भारतमा बेरोजगार बसेका बडायक नेपाल–भारत सीमा खुल्ला भएपछि घर फर्किएका हुन् । “दश जनाको परिवार छ कमाउने कोही छैन” उनले भने–“म कामविहीन हुँदा घरका अरु सदस्य पनि खर्च कहाँबाट चलाउने भनेर चिन्तामा छन् ।” कोरोनाको डरले आफू तीन वर्ष पछि भारतबाट फर्किएको उनको भनाई छ । “कमाएर ल्याएको सकिसक्यो । फेरि भारत जाने विचारमा छु” उनले भने–“ न हातमा त सीप छ नत यहाँ केही गर्न लगानी नै ।”
उनले भारत मजदुरीका लागि जानुअघि आफू जेसिबी चलाउने गरेको बताए । उनले भने–“ कोरोनाले भारतमा कम्पनी नै बन्द भएपछि घर फर्किनु परेको हो ।” प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले पनि कोरोना प्रभावितहरुलाई स्वरोजगार बनाउने बताइरहेका बारेमा उनले आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । उनले भने “सरकारले कार्यक्रमहरु दिइसकेका छैनन् तर आफूलाई यहाँ घर चलाउनै मुस्किल हुन लागिसक्यो ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नौ हजार जनालाई स्वरोजगार तथा रोजगारी दिने योजना बनाए पनि भारत जाने क्रम चलिरहेकै छ । यही क्रममा गड्डाचौकी नाका हुँदै भारत गइरहेका भीमदत्तनगरपालिका–१३ का इन्द्र सुनारले पनि आफू बाध्यताले परिवारसहित भारत जान लागेको बताए । “धेरै समय महाकाली नदीमा बालुवा छानेर पनि परिवारको खर्च चलाएँ” सुनारले भने–“पाँच वर्षदेखि भारत गएर मजदुरी गर्दैछु ।” उनले पनि स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा विपत्का बेला पनि मुलुक छोडुन परेको बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक अमरबहादुर थापाले महिना दिनयता मजदुरका लागि गड्डाचौकी र गौरीफन्टा नाकाबाट भारत जाने क्रम चलिरहेको बताए । “दुवै नाकाबाट गरेर दैनिक ५ देखि ६ सय नेपालीहरु भारत जाँदैछन्” उनले भने–“उनीहरु यस्तो अवस्थामा पनि किन जान लागेको भन्दा मजदुरी गर्नकै लागि जान लागेको भन्नेहरु नै अधिकांश छन् ।”
१० कार्तिक २०७७, सोमबार १९:४३
८ कार्तिक २०७७, शनिबार १५:११